Sajhasabal.com | Homeविदेशबाट शनिबार १ हजार १४ नेपाली स्वदेश फर्किए, कुन देशबाट कति ?
विदेशबाट शनिबार १ हजार १४ नेपाली स्वदेश फर्किए, कुन देशबाट कति ?
साउन १७, काठमाडौँ । विभिन्न मुलुकमा अलपत्र एक हजार १४ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । कोभिड–१९ को जोखिमका कारण विदेशमा अलपत्र परेका उनीहरु विभिन्न एयरलाइन्सले उद्धार चार्टर्ड उडानमार्फत स्वदेश फर्किएका हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज आवागमन र प्रस्थान दुवै गरी ११ अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडान भएका छन् ।